” उही पुरानो याद ले सतायो।”- जानकी जानु – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ कार्तिक २०७७, बुधबार ०१:५४ English
” उही पुरानो याद ले सतायो।”- जानकी जानु
दुई बर्ष अगाडि कुराले आँज मलाई फेरी झंस्काई दियो कता कता मन दुखेर आयो किन हो किन एकान्तमा हराएर प्रकृति संग बस्न मन लाग्यो यो मनमा कसै प्रति धेरै माया जागेर किन आउँछ त्यही माया दिने मन माया मानै छल भयो भने राप बलि चट्टान परे जस्तो किन हुन्छ हो यो माया भन्ने चिजले मानिशलाई आँधीहुरीमा भुमरी मार्दै समुन्द्रको छालमा पुर्याउँछ त पत्थरमा ठोकी चट्टान बनाइ दिन्छ हो यस्तै गरी मलाई उहि पुरानो यादले फेरी अर्को कहानी दोहराएको छ ।
मेरो कलेज पढ्दाको साथी थियो हामी संगै कलेज आउने जाने गर्थ्यौं हामी दुईमा भावानाको नाता थियो सोचेको थिइनँ उस्ले प्रेम प्रस्ताब गर्छ भनेर उस्ले प्रेमको हात बढाए पछि म केही बोल्न सकिनँ । मैले सोचेको पनि थिइन उस्ले माया गर्छ भनि उस्लाइ एउटा असल साथी संझेको थिए म मौन रहें । उ भाबुक भएर “काली तिम्ले मलाई मेरो जवाफको उत्तर दिइनौ नि? कहिँ म गलत त भइनँ?
“रोहित तिमी असल छौ एक साथीमा हुनु पर्ने गूण तिमीमा पाएकी छु र तिमी भनेको उच्च स्तर को मान्छे तिम्रो र म तिम्रो स्तरको मान्छे होइन र म यो पनि चाहन्नँ मेरो कारण तिम्रो घर परिवारमा कुनै आचँ आऊन््तिमी सुखी परिवारमा हुर्केको मान्छे म सानो तिनो काम ले गुजारा चलाउँछु ।
“सन्जू यो तिमीले के भनेकी धन सम्पतिमा यश आराम पाइन्छ ।तर मनले चाहेको मान्छे त पाइदैनँ नि मेरो चाहनाहो तिमी मलाई थाह छ सन्जु यदि तिमीलाई पाइन भने म अरु सँग मन मुटु साट्ने छैन तिमी संग पहिलानै भन्न चाहेको थिएँ तर ममा आँट आएको थिएन फेरि मैले प्रतिक्षा गर्न सकिनँ । हो काली म तिमीलाइ आफु भन्दा पनि धेरै माया गर्छू ।”
रोहितको मायाले मलाई गलायो म उस्को मायामा डुब्न थाले रोहित बाहेक अरु केही सोच्न सकिन हाम्रो प्रेम समयको गति संगै अघि बढ्दै गयो । एक आपसमा नछूटिने बाचाँ कसम खायौ यसरी नै बर्षौ बिती सकेको थियो । अचनाक एक दिन मेरो मुटु झस्कियो बिहानी पख पानी परि राखेको थियो निलो गगनको बिरुप पारी आकाश गर्जीदै बिजुलीले आफ्नो गति छोड्दै थियोगाउँ बस्तिनै बगाएर लैजान्छ कि जस्तो भयो रुख बिरुवा एक आपसमा ठोकी ढल्न थाल्यो कता कता मनमा डर लाग्न थाल्यो ।
आज यस्तो के हुन लागेको रोहित पनि काठ्मान्डौ जाने भनेको थियो । भेट नभएको पनि धेरै दिन भैसक्यो आजै यस्तो दिन हुन परेको रोहित लाई के भए छ । भेट नहुँदा म्यासेज पठाउने गर्थ्यो आज भोलि रोहित लाई पनि केभा’छ कुन्नि ।मैले म्यासेज गर्दा पनि जवाफ आउदैन यो माया भन्ने चिज पनि कस्तो हो रिगी रैछ । मुटु खाने मनमा अनेक थरि कुरा सोच्दै बसे पानी पनि झन झण बर्षदै आयो टाढा बाट कोहि आए जस्तो लाग्यो उ मेरो नजिक आइ पुग्यो।
उ त मेरो रिहीत पो रहेछ म उस्लाई केही सोध्न सकिन उस्को अंगालोमा बाधिएर रुन थालेँ ।
” रोहित तिमी काहाँ थियौ ? यतिका दिन सम्म केहि त बोल न किन चुपचाप रहन्छौ ?तिमी ठिकै छौ नि?”
म उस्को हातमा चुम्दै ओठँमा मायाको स्पर्स दिदै आफ्नो अँगालोमा बाधे उ चुपचाप एक शिला जस्तै उभी रहयो ।
” रोहित तिमीलाई मेरो याद आएन ?तर रोहित यस्तो पानीमा अचनाक आखिर मेरो माया ले डोर्याएर ल्यायो नि।”
मलाई आफ्नो अंगालो बाट हटाई ”
सन्जु तिमी संग जरुरि कुरा गर्नु थियो”
” रोहित के जरुरी कुरा हो भनन मलाई सुन्न आतुर भै सक्यो”
उ केही नबोली बिहेको कार्ड मेरो हातमा राखिदियो ।
” रोहित यो कस्को बिहेको कार्ड हो ?”
“सन्जु यो बिहेको कार्ड अरु कसैको होइन मेरो हो मलाई माफ गरिदेउ म तिमीलाई साथ दिन सकिनँ”
यति भनेर उ फर्केर गयो पहाड बाट खसेको ढूङगाँ मेरो छातिमा बज्रिए जस्तो भयो आजको पानी र आकाशमा गर्जेको बिजुली मेरो मुटुमा चट्टान परे जस्तो भयो । आजको आँधीबेहरी मेरो खशी तहस नहस पार्न आएको रहेछ । उस्ले मलाई दुई दिनको जिउने माया दिएर एक पलमै मृत्यु को सिरानी बनाई दियो । मलाई आँशु दिई खुशिको संसार बसाउन पुग्यो । थाह भएन उस्ले किन धोका दियो । प्रेम सुरुवात उसैले गर्यो अन्त पनि उसैले। उस्ले माया मारे पनि मैले त माया मार्न सकिन त्यो दिन आकाश बाट झरेको पानी थियो या मेरो आखाँ बाट बर्षेको आँशू जिउदै जिन्दगीको घाटमा पुरायो । यौवनको प्यास मेट्न एक मसिहा बनायो धेरै रोए धेरै कराए मेरो चित्कार गहिरो तालमा परे छ र्निमोहीले किन पो सुन्थ्योर मृत्यु को सिरानी राखेर जिउनु परेछ।
मलाई आफ्नै घर आगँन ले चिथोर्न थाल्यो हिड्ने बाटोमा काडाँ ले कोप्न थाल्यो जहाँ जाउँ उसैको याद आउँ छ आफ्नो छाँया देखी भाग्न मन लाग्यो भन्ज्याङमा फुलेका लाकुरीले मलाई बिझाउन थाल्यो ।बैगुनीले मन भरी चोट भरि दियो देखावोटी मायाले जिउदै जलेको लास सरि बनायो ।उ त अमेरिका को डर्लरमा रमाउन थालेको छ मनमा चोटको खाटो बोकी जिन्दगी यस्तै रहेछ आफ्नो मन आफै सम्हाली छोटो जिन्दगीको लामो आश बोकी आफ्नो मातृभूमि छोडी अरब खाडीमा आएँ । के थाहा थियो र जिन्दगीले अर्को मोड मोड्छ प्रदेश को ठाउँ तेस्तै हो यहाँ को रहन सहनमा घुल मेल हुनु नै पर्ने । महिना दिन हुँदै बर्षौ बितिसकेको हुन्थ्यो । रोहित को यादले पिछा छोडेको थिएन फेरि पनि जिउनु नै पर्ने अतित लाई संझदै थिए ।
मोबाईल को घन्टी बज्यो मैले रिसीब गर्न चाहिनँ ।बार बार कल आउन थाल्यो कल रिसीब भयो अन्जान ब्यक्ति थियो । “सरि रगँ नम्बर लागेछ” उ एक दिन दुइ दिन हुँदा हुँदै उ नजिक हुन खोज्थ्यो। मलाई भने झर्को लाग्थ्यो उ दिन प्रति दिन फोन म्यासेज बढ्न थाल्यो उ संझाउने बहानामा नजिक हुन चाहन्थ्यो । मलाई भने रोहितको चाल बाजीले डरको भयंकर घर बनाएको थियो । यता भने अविनाश ले सहनशीलता नै सफलको बाटो हो भनी जिन्दगी को अर्थ सिकाउने गर्थ्यो । उ नजिक हुन चाहन्थ्यो ।
“सन्जू के म तिम्रो दु:ख सुखको साथी बन्न सक्दिनँ? हिजो के थियो त्यो र्बिर्सीएर कुनै नयाँ जिन्दगी सुरु गरे हुदैनर ? जिन्दगी को कल्पना गर त त्यहाँ सधै एउटै बाटो हिड्नु पर्दैन । सन्जु तिम्रो बिषयमा जे जति जाने मलाई पनि दू:ख लाग्यो के तिमी सधै भरी तेही अतितलाई संझेर आफ्नो जिन्दगी को खूसी हरु छिन्छेउ? एक चोटी कोल्टो फेरेर हेर त त्यहाँ तिम्रो जिन्दगीको पूरा भाग छ । हो, सन्जु हिजोको अतितलाई र्बिर्सीएर आजको बर्तमान लाई हेर्नू पर्छ सन्जु । समय संगै जिन्दगी ढल्कि जान्छ हुनत तिमी संग मेरो मन को कुरा गर्दा पक्कै पनि तितो लाग्ला तर पनि तिमी लाई मैले भन्नू पर्छ सन्जु म तिमीलाई जिन्दगीको सह यात्री संगै जीवन साथी बनाउन चाहन्छ बिगतलाई छोड्देउ। बर्तमान लाई अँगाल्नु पर्छ।”
” अविनाश मैले रोहितको मायामा नै आफ्नो जिन्दगी अपर्ण गरेकी छू । उस्ले धोका दिएर के भो त उसँग बिताएका दुई पल को खुशि लाई मैले आफ्नो जिउने सहारा बनाएकी छू । अविनाश मलाई आफ्नै हालतमा छोडिदेउ। मैले अर्को चोटी भावानामा ठेश लाग्ने गल्ति गर्ने छैन ।”
” सन्जु कति सम्म मुटु दुखाउने घाउँ बल्झाई रहन्छ्यौ? फूलको बिरुवा सारे फुल फुल्छ काडाँ रोप्यौ भने मुटुमा बिज्छ । ”
“अविनाश अब त मलाई काडाँ माथी हिड्न र काडाँ बिच्छौना बानि परी सकेको छ । म संग प्रेमको कुरा नगर ।अविनाश, माया को शब्दले मुटुमा बिझाउँछ। ”
“सन्जु यस्तो कुरा नगर । म तिमी बिना बाच्न सक्दिन तिमीले मेरो माया लाई इन्कार गर्यो भने भोलि तिमीले अविनाश लाई खोजेर भेटाउने छैनौ। मलाई तिम्रो मायाको खाँचो छ । मेरो जिन्दगी को रफ्तार तिमी सँगै जोडेको छु मेरो जिन्दगी तिम्रो हातमा छ मलाई जिन्दगी दिन पनि सक्छौ मृत्यु पनि”
कस्तो बिडम्बना मैले केही बुझ्न सकिनँ अविनाशको पागल पनले मलाई सताउन थाल्यो मनै त हो नी मरुभूमिको प्रकृती सँग फुल्न थालेछु ।दिन प्रति दिन कुराकानी को बिचमा हाम्रो सम्बन्ध अगाडि बड्दै गयो टेलीफोनमै मायाको स्पर्स लिई चुम्बनको बर्षात बर्सिन थाल्यो । बिबाहको सम्बन्ध लाई अगाडि बढाई टेलिफोनमै जिन्दगीको बाटो गुड्न थाल्यो। मिठो मिठो स्वरमा अनेकौ नाम बद्लिन थाल्यो कहिले” सानो राजा” त “सानो मान्छे”, “कालु” काले यिनै मायालु सब्द प्रेममा बद्लिन थाल्यो ।
सायद यो पनि हुने माया हो कि रुने माया हो थाह छैन एक दिन को कुरा प्रदेश को ठाउँ डिउटीमा अलि बि जि थिए उस्को फोन आएछ। काम को ब्यस्तताले गर्दा फोन पनि रिसीब गर्ने फुर्सद भएन। केही घन्टा पछि फोन रिसीब भयो उस्को आवजमा यति बियोग थियो।
” काली तिमी कहाँ थियौ? भन काली तिमी लाई मेरो याद आएन काली? तिमी बिना एक पल पनि टाढा बस्न गाह्रो हुन्छ मलाई ”
उसको काली शब्दले म झसंग भए फेरी उही पूरानो यादले सतायो म चुप चाप भएँ किन कि रोहित ले पनि सधै काली कान्छी भनि बोलाउँथ्यो। मायाले बोलाए को नाम कहिलेकाँहि मुटु बिझाउँदो रहेछ। म उही पुरानो यादमा डुब्न थाले छाति र्ददराउन थाल्यो ओठ कापी आँखा बाट आँशु बर्सियो । थाह नै पाइनँ कि अविनाश टेलीफोन लाईनमा छ भनी । अविनाश ले बोलायो |काली तिमी किन यसरी आफूलाई कम्जोर पार्छौ ?”
“अविनाश मनै हो दुख्दो रहेछ कालु सानो राजा अब यि जिन्दगी हजुरकै हो। तिम्रो विश्वास नै मेरो जिन्दगी हो।”
” काली तिमीले मलाई बिस्वास गर म बाट धोका हुने छैन”
थाह छैन जिन्दगी ले अझै कुन मोड मोड्ने हो पहिलो प्रेम ले आँशू दियो प्रदेशी कालुले अन्तिम घडी सम्म साथ देला?
यिनै तिता मिठा जिन्दगी को कथाले बिट मारे को बाटो फेरी फुकाइदिन्छ। अनि मुटु भित्र को घाउ बल्झेर आउँछ । यो त जिन्दगी को गीत हो
समय संगै चल्ने मौसम को प्रीत हो ।
खैरेनिटार ८ तनहुँ
हाल कुवेत 2011/6/30
२ चैत्र २०६८, बिहीबार ११:५२ मा प्रकाशित